UMalema uzifikele mathupha esifundeni sasoThukela | Eyethu News
UMalema uzifikele mathupha esifundeni sasoThukela
“UMalema ufake isitswebhu kubaholi bamagatsha esifundazweni saKwaZulu-Natali.”
Kugesikhathi uJulius Malema ehambele isifunds soThukela ngoLwesihlanu.
UMholi we-Econimic Freedom Fighters (EFF) uMnuz Julius Malema, ugaleleke kwezwakala ehhovisi lalenhlangano elisenkabeni yedolobha laseMnambithi ngoLwesihlanu, ephelezelwa usomlomo waleliqembu uMnuz Mbuyiseni Ndlozi.
Ukutheleka kungazelele muntu kobuholi obuphezulu baleliqembu, kukhomba kona ukuthi bebungazile ukuzosinisa amahleza, njengoba nabezindaba bebengavumelikile ukuba yinxenye yalomhlangano, okuze kwaphoqa leliphephandaba ukuba lifulathele ihhovisi lalenhlangano njengoba lize lathambama ilanga kushikisha ufudu emhlanganweni odonse amahora amaningi.
Ongumxhumanisi waleliqembu esifundeni sasoThukela uMnuz Vusumuzi Mngadi, upotshozelele leliphephandaba ngobekudingidwa emhlanganweni, kepha wala waphetha ukwenaba kakhulu njengoba eveze ukuthi okuningi obekukhulunywa kulomhlangano, bekuyimfihlo ethinta iqembu.
Ubeke kanje ngenkathi ekhuluma ne-Eyethu:
“UCommander In Chief washo kwabezindaba ukuthi kulonyaka uzobonakala eza phansi ehambela amagatsha, ngenhloso yokukhombisa ukuthi i-EFF ikhona, ikakhulukazi njengoba ingabonakali ngendlela egculisayo lapha esifundeni sasoThukela. So inhloso yakhe yokuza lapha ubezosiqinisa idolo, waphinde wasigqugquzela ukuthi uma sakha amagatsha, kumele sikhumbuze abantu ukuthi i-EFF ingabasiza kanjani,” kubeka uMngadi.
Uqhube wathi uMalema ube esefaka isitswebhu ebaholini bamagatsha alapha esifundazweni saKwaZulu-Natal, ngokubagqugquzela ukuthi banyuse amasokisi bakhe amagatsha anobuholi kanye nesisekelo esiqinile, kwazise ubuholi bamagatsha amaningi kulesisifundazwe bahlakazwa.
Ube eseveza ukuthi uMalema uluthintile udaba lokuziphatha kwabaholi abamele iqembu komasipala, wathi abaholi kumele baziphathe ngendlela esezingeni, hhayi ngendlela ezogcina ngokudicilela phansi isithunzi seqembu, kepha wakuchitha ukuthi lesisitatimende besibhekiswe ebuholini basoThukela.
Uphethe inkulumo yakhe ngokusho ukuthi umengameli weqembu ube esecela ukuthi ubuholi begatsha bumele buqinisekise ukuthi zonke izinhlelo zeqembu ezibhekene nomphakathi, kumele zenziwe ukuze abantu bezobona ukuthi leliqembu likhona emphakthini wasOthukela.
Uyelulekwa umfundi obanjwe ezama ukuzibulala